May 28, 2022 - Achawlaymyar
နေအိမ်ဘုရားစင်ရှေ့မှာ ချီး ထိုင်ယိုထားခဲ့ပြီး သေတ္တာနှစ်လုံးနဲ့ ရွှေထည် သိန်း(၂၀၀) ဖိုးခိုးယူသွားတဲ့ ဖြစ်ရပ်
May 28, 2022 by Achawlaymyar
နေအိမ်ဘုရားစင်ရှေ့မှာ ချီး ထိုင်ယိုထားခဲ့ပြီး သေတ္တာနှစ်လုံးနဲ့ ရွှေထည် သိန်း(၂၀၀) ဖိုးခိုးယူသွားတဲ့ ဖြစ်ရပ် တနိုင်းမြို့ ဆင်မ်ဆာ့ရပ်ကွက် ချောင်းတဖက်ကမ်းရှိ ဒိုးလေး ဆီဆိုင် ဦးအောင်တိုး၏နေအိမ်အား ယမန်နံနက် (၃း၃၀)ချိန်ခန့်က နေအိမ်တံခါးအား ကလန့်ဖွင့်၍ ဦးအောင်တိုး အိပ်နေသည့်အခန်းအတွင်းမှသေတ္တာ (၂)လုံးပျောက်ဆုံးသွားကြောင်းသိရှိရပါသည်။ ပိုင်ရှင်း ဦးအောင်တိုးမှ နံနက် (၄)နာရီခန့် အိပ်ရာမှနိုးလာစဉ် ပျောက်ဆုံးသေတ္တာများအား အိမ်းသားများနှင့်အတူလိုက်လံရှာဖွေနေစဉ် အနီးရှိ တံတားလုံခြုံရေး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များသို့ သွားရောက်အကြောင်းကြားခဲ့ပြီးနောက် အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်းများသို့ လိုက်ရှာဖွေရာ ဇေယျာသီရိဘုန်းကြီးကျောင်းအနီးရှိ သစ်ပင်၌တဲထိုးသည့်နေရာမှ သေတ္တာ (၁)လုံးနှင့်သံဘုတ်လေအတွင်းမှသေတ္တာ(၁)လုံးတို့အား၎င်းတို့အိမ်သားအဖွဲ့ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ၎င်းပျောက်ဆုံးသေတ္တာထဲများတွင် ရွှေ(၁၀)ကျပ်သားခန့် စိန်လက်စွပ်(၁)ကွင်း ငွေသား သိန်း (၃၀)ကျပ်နှင့်ဖုံး(၂)လုံးငွေသားနှင့်ကာလတန်ဘိုးသိန်း(၂၀၀)ခန့်ရှိကြောင်း အိမ်ပိုင်ရှင် ဦးအောင်တိုးမှပြောသည် ခိုးယူသွားသည့် အခန်း ဘုရားစဉ်ရှေ့တွင် သူခိုးများ ချီးယိုသည့် ပုံကိုတွေ့ရှိကြောင်း ဒါထူးဆန်းတယ်ဗျာလို့ ဆိုပါတယ်။ ဖြစ်စဉ်အား … Read more
ဆယ်တန်းမှာ တနိုင်ငံလုံး ပထမရတဲ့ ကလေးက ထောက်ပြလိုက်တဲ့ မြန်မာ့ပညာရေးစနစ် အမှားများ….
ဆယ္တန္းမွာ တႏိုင္ငံလုံး ပထမရတဲ့ ကေလးက ေထာက္ျပလိုက္တဲ့ ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္ အမွားမ်ား…. ” ခုနက စင္ေပၚစကားတက္ေျပာတဲ့ ေမာင္ေလး မဟုတ္လား . . .” ” ဟုတ္ကဲ့ပါအစ္မ ” ”တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာ First ရထား တဲ့သူ ဆိုေတာ့ ေမာင္ေလးစကားက သူတို႔ အတြက္ သိပ္အေရးပါတယ္…ေမာင္ေလးေပး တဲ့ အႀကံရဲ႕ ဆိုးျခင္း ေကာင္းျခင္း ကို သူတို႔ ခံစားရလိမ့္မယ္…” ‘ဟုတ္ကဲ့ ကြၽန္ေတာ္လက္ခံပါတယ္” ”ေမာင္ေလးက ေျပာတယ္ … ဆယ္တန္းစာကို သင္တာ ဆယ္တန္းစာကို တတ္ေျမာက္ေအာင္လို႔ ေျပာတယ္ လက္ရွိ မွာက ဆယ္တန္းစာေမးပြဲဟာ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္အတြက္ ဂိတ္တံခါးလိုျဖစ္ေနတယ္…အမ်ားစုဟာ ဆယ္တန္းစာကို အမွန္ တကယ္ တတ္ေျမာက္ဖို႔ထက္ အမွတ္ေကာင္းေကာင္းယူၿပီး လိုင္းေကာင္းေကာင္းကို … Read more
ဖေဖေဦးခင်လှိုင်က တက်တူးတွေနဲ့ဆိုပေမယ့် နှစ်ယောက်မရှိနိုင်တဲ့ ဖခင်ကောင်းတယောက်ပါလို့ဆိုလာတဲ့ သဇင်ထူးမြင့်…
ဖေဖေဦးခင်လှိုင်က တက်တူးတွေနဲ့ဆိုပေမယ့် နှစ်ယောက်မရှိနိုင်တဲ့ ဖခင်ကောင်းတယောက်ပါလို့ဆိုလာတဲ့ သဇင်ထူးမြင့် ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေသရုပ်ဆောင်သဇင်ထူးမြင့်ကဟာသသရုပ်ဆောင်ဦးခင်လိုင်ရဲ့သမီးငါ်လေးဖြစ်ပြီးလတ်တလောမှာအောင်မြင်နေတဲ့တတ်သစ်စအနုပညာကြယ်ပွင့်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဦးခင်လိုင်ကအနုပညာလောကလူမှူ့ဆက်ဆံရေးမှာလဲအရမ်းသဘောကောင်းပြီးစိတ်ထားပြည့်ဝသူပဲဖစ်ပါတယ်။သားသမီးတွေအပေါ်မှာလဲအကောင်းဆုံးဖြည့်ဆီးပေးနိုင်နဲ့ဖခင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အကိုဖြစ်သူနေရဲရဲ့လက်ထက်ခွင့်တောင်းတဲ့အစီအစဥ်မှာဘေးမှာရှိတဲ့ဦးခင်လိုင်ရဲ့ပီတိအပြုံးရိပ်တွေကပရိတ်သတ်တွေကြားမှာလေးစားဖွယ်ပြန့်လွင့္လာခဲ့ပါတယ်။သဇင်ထူးမြင့်ကတော့သူ့မရဲအဖေဟာတတ်တူးတွေနဲ့ဆိုပေမယ့်နှစ်ယောက်မရှိနိုင်တဲ့ဖခင်ကောင် းတစ်ယောက်ပါလို့ရင်ဖွင့်လာခဲ့ပါတယ်။ crd zawgyi ခ်စ္ပရိတ္သတ္ႀကီးေရသ႐ုပ္ေဆာင္သဇင္ထူးျမင့္ကဟာသသ႐ုပ္ေဆာင္ဦးခင္လိုင္ရဲ႕သမီးငၚေလးျဖစ္ၿပီးလတ္တေလာမွာေအာင္ျမင္ေနတဲ့တတ္သစ္စအႏုပညာၾကယ္ပြင့္ေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။ဦးခင္လိုင္ကအႏုပညာေလာကလူမႉ႔ဆက္ဆံေရးမွာလဲအရမ္းသေဘာေကာင္းၿပီးစိတ္ထားျပည့္ဝသူပဲဖစ္ပါတယ္။ သားသမီးေတြအေပၚမွာလဲအေကာင္းဆုံးျဖည့္ဆီးေပးႏိုင္နဲ႔ဖခင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ အကိုျဖစ္သူေနရဲရဲ႕လက္ထက္ခြင့္ေတာင္းတဲ့အစီအစဥ္မွာေဘးမွာရွိတဲ့ဦးခင္လိုင္ရဲ႕ပီတိအၿပဳံးရိပ္ေတြကပရိတ္သတ္ေတြၾကားမွာေလးစားဖြယ္ျပန္႔လြင့္လာခဲ့ပါတယ္။ သဇင္ထူးျမင့္ကေတာ့သူ႔မရဲအေဖဟာတတ္တူးေတြနဲ႔ဆိုေပမယ့္ႏွစ္ေယာက္မရွိႏိုင္တဲ့ဖခင္ေကာင္ းတစ္ေယာက္ပါလို႔ရင္ဖြင့္လာခဲ့ပါတယ္။ crd ေေဖဖဦးခငႅႈိငၠ တကၱဴးေၾတနဲ႔ဆိုေပမယ့္ ႏြစ္ေယာကၼ႐ြိႏိုငၱဲ့ ဖခင္ေကာင္းေတယာကၸါလို႔ဆိုလာတဲ့ သဇငၳဴး်မင့္…ခ္စၸရိတ္သတ္ႀကီးေရသ႐ုပ္ေဆာင္သဇငၳဴး်မင့္ကဟာသသ႐ုပ္ေဆာင္ဦးခငႅိဳင္ရဲ႕သမီးငၚေလး်ဖစ္ၿပီးလေတၱလာမြာေအာင္်မင္ေနတဲ့တတ္သစၥအႏုပညာၾကၾယၸင့္ေလးပဲ်ဖစၸါတယ္။ ဦးခငႅိဳငၠအႏုပညာေလာကလူမႉ႔ဆကၦံေရးမြာလဲအရမ္းေသဘာေကာင္းၿပီးစိတၳား်ပၫ့္ဝသူပဲဖစၸါတယ္။သားသမီးေၾတေအပၚမြာလဲေအကာင္းဆုံး်ဖၫ့္ဆီးေပးႏိုငၷဲ႔ဖခင္ေကာင္းတစ္ေယာက္်ဖစၸါတယ္။အကို်ဖစ္သဴေနရဲရဲ႕လကၳၾကၡင့္ေတာင္းတဲ့အစီအစၪၼြာေဘးမြာ႐ြိတဲ့ဦးခငႅိဳင္ရဲ႕ပီတိအၿပဳံးရိပ္ေၾတကပရိတ္သတ္ေၾတၾကားမြာေလးစားျဖယ္်ပႏ္႔ၾလင့္လာခဲ့ပါတယ္။ သဇငၳဴး်မင့္ေကတာ့သူ႔မရဲေအဖဟာတတၱဴးေၾတနဲ႔ဆိုေပမယ့္ႏြစ္ေယာကၼ႐ြိႏိုငၱဲ့ဖခင္ေကာင္ းတစ္ေယာကၸါလို႔ရျငၹင့္လာခဲ့ပါတယ္။ ေေဖဖဦးခငႅႈိငၠ တကၱဴးေၾတနဲ႔ဆိုေပမယ့္ ႏြစ္ေယာကၼ႐ြိႏိုငၱဲ့ ဖခင္ေကာင္းေတယာကၸါလို႔ဆိုလာတဲ့ သဇငၳဴး်မင့္…ခ္စၸရိတ္သတ္ႀကီးေရသ႐ုပ္ေဆာင္သဇငၳဴး်မင့္ကဟာသသ႐ုပ္ေဆာင္ဦးခငႅိဳင္ရဲ႕သမီးငၚေလး်ဖစ္ၿပီးလေတၱလာမြာေအာင္်မင္ေနတဲ့တတ္သစၥအႏုပညာၾကၾယၸင့္ေလးပဲ်ဖစၸါတယ္။ ဦးခငႅိဳငၠအႏုပညာေလာကလူမႉ႔ဆကၦံေရးမြာလဲအရမ္းေသဘာေကာင္းၿပီးစိတၳား်ပၫ့္ဝသူပဲဖစၸါတယ္။သားသမီးေၾတေအပၚမြာလဲေအကာင္းဆုံး်ဖၫ့္ဆီးေပးႏိုငၷဲ႔ဖခင္ေကာင္းတစ္ေယာက္်ဖစၸါတယ္။အကို်ဖစ္သဴေနရဲရဲ႕လကၳၾကၡင့္ေတာင္းတဲ့အစီအစၪၼြာေဘးမြာ႐ြိတဲ့ဦးခငႅိဳင္ရဲ႕ပီတိအၿပဳံးရိပ္ေၾတကပရိတ္သတ္ေၾတၾကားမြာေလးစားျဖယ္်ပႏ္႔ၾလင့္လာခဲ့ပါတယ္။ သဇငၳဴး်မင့္ေကတာ့သူ႔မရဲေအဖဟာတတၱဴးေၾတနဲ႔ဆိုေပမယ့္ႏြစ္ေယာကၼ႐ြိႏိုငၱဲ့ဖခင္ေကာင္ းတစ္ေယာကၸါလို႔ရျငၹင့္လာခဲ့ပါတယ္။ ေေဖဖဦးခငႅႈိငၠ တကၱဴးေၾတနဲ႔ဆိုေပမယ့္ ႏြစ္ေယာကၼ႐ြိႏိုငၱဲ့ ဖခင္ေကာင္းေတယာကၸါလို႔ဆိုလာတဲ့ သဇငၳဴး်မင့္…ခ္စၸရိတ္သတ္ႀကီးေရသ႐ုပ္ေဆာင္သဇငၳဴး်မင့္ကဟာသသ႐ုပ္ေဆာင္ဦးခငႅိဳင္ရဲ႕သမီးငၚေလး်ဖစ္ၿပီးလေတၱလာမြာေအာင္်မင္ေနတဲ့တတ္သစၥအႏုပညာၾကၾယၸင့္ေလးပဲ်ဖစၸါတယ္။ ဦးခငႅိဳငၠအႏုပညာေလာကလူမႉ႔ဆကၦံေရးမြာလဲအရမ္းေသဘာေကာင္းၿပီးစိတၳား်ပၫ့္ဝသူပဲဖစၸါတယ္။သားသမီးေၾတေအပၚမြာလဲေအကာင္းဆုံး်ဖၫ့္ဆီးေပးႏိုငၷဲ႔ဖခင္ေကာင္းတစ္ေယာက္်ဖစၸါတယ္။အကို်ဖစ္သဴေနရဲရဲ႕လကၳၾကၡင့္ေတာင္းတဲ့အစီအစၪၼြာေဘးမြာ႐ြိတဲ့ဦးခငႅိဳင္ရဲ႕ပီတိအၿပဳံးရိပ္ေၾတကပရိတ္သတ္ေၾတၾကားမြာေလးစားျဖယ္်ပႏ္႔ၾလင့္လာခဲ့ပါတယ္။ သဇငၳဴး်မင့္ေကတာ့သူ႔မရဲေအဖဟာတတၱဴးေၾတနဲ႔ဆိုေပမယ့္ႏြစ္ေယာကၼ႐ြိႏိုငၱဲ့ဖခင္ေကာင္ းတစ္ေယာကၸါလို႔ရျငၹင့္လာခဲ့ပါတယ္။ ေေဖဖဦးခငႅႈိငၠ တကၱဴးေၾတနဲ႔ဆိုေပမယ့္ ႏြစ္ေယာကၼ႐ြိႏိုငၱဲ့ ဖခင္ေကာင္းေတယာကၸါလို႔ဆိုလာတဲ့ သဇငၳဴး်မင့္…ခ္စၸရိတ္သတ္ႀကီးေရသ႐ုပ္ေဆာင္သဇငၳဴး်မင့္ကဟာသသ႐ုပ္ေဆာင္ဦးခငႅိဳင္ရဲ႕သမီးငၚေလး်ဖစ္ၿပီးလေတၱလာမြာေအာင္်မင္ေနတဲ့တတ္သစၥအႏုပညာၾကၾယၸင့္ေလးပဲ်ဖစၸါတယ္။ ဦးခငႅိဳငၠအႏုပညာေလာကလူမႉ႔ဆကၦံေရးမြာလဲအရမ္းေသဘာေကာင္းၿပီးစိတၳား်ပၫ့္ဝသူပဲဖစၸါတယ္။သားသမီးေၾတေအပၚမြာလဲေအကာင္းဆုံး်ဖၫ့္ဆီးေပးႏိုငၷဲ႔ဖခင္ေကာင္းတစ္ေယာက္်ဖစၸါတယ္။အကို်ဖစ္သဴေနရဲရဲ႕လကၳၾကၡင့္ေတာင္းတဲ့အစီအစၪၼြာေဘးမြာ႐ြိတဲ့ဦးခငႅိဳင္ရဲ႕ပီတိအၿပဳံးရိပ္ေၾတကပရိတ္သတ္ေၾတၾကားမြာေလးစားျဖယ္်ပႏ္႔ၾလင့္လာခဲ့ပါတယ္။ သဇငၳဴး်မင့္ေကတာ့သူ႔မရဲေအဖဟာတတၱဴးေၾတနဲ႔ဆိုေပမယ့္ႏြစ္ေယာကၼ႐ြိႏိုငၱဲ့ဖခင္ေကာင္ းတစ္ေယာကၸါလို႔ရျငၹင့္လာခဲ့ပါတယ္။ crd
သရုပ်ေ ဆာင်ပိုင် တံခွန်နဲ့ အမိုက်စား သီချင်းဗီဒီယိုေ လး ထွက်ဖို့ရှိကြောင်း ပရိတ် သတ်တွေကို အသိေ ပးလာတဲ့ မေတိုးခိုင် သရုပ်ဆော င်ပိုင်တံခွန်ကေ တာ့အ မိုက်စားသရု ပ်ဆောင် ချက်တွေနဲ့အ တူကျရာ ဇာတ်ေ ကာင်တွေမှာ အကောင်းဆုံးသ ရုပ်ဆောင်နို င်ခဲ့တာေြ ကာင့်ပရိတ် သတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားေ ပးမှုကိုအ ခိုင်အမာရရှိထား ပါတယ်ေ နာ်။ သရုပ်ဆောင်ေ မတိုးခိုင်ကတော့ပြင်လှတဲ့ သရုပ်ဆော င်ချက်တွေအတူ နဲ့ကျရာ ဇာတ်ကောင်ေ တွမှာအကောင်း ဆုံးသရုပ်ေ ဆာင်နိုင်ခဲ့တာေ ကြာ င့်ပရိတ် သတ်တွေရဲ့အားေ ပးမှုကိုအခို င်အမာရရှိထား ပါတ ယ်နော်။ အခုတစ်ခါ မှာဆိုရင်သ ရုပ်ဆောင်ေ မတိုးခိုင်က သရုပ်ဆောင် ပိုင်တံခွန်နဲ့ အမိုက်စားသီ ချင်းဗီဒီယိုလေး … Read more
ချစ်သူနဲ့ လက်မထပ်ရသေးပဲ အတူအိပ်ဖို့ စိတ်ကူးရှိနေရင် ဖတ်ကျိလိုက်ပါ ချစ်သူနဲ့ အိပ်ဖို့ စိတ်ကူး ရှိနေတဲ့ အပျိုစစ်စစ် မိန်းကလေးများ အားလုံး ဖတ်သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်.. မိန်းကလေး အားလုံး ဖတ်ရန်..ရည်းစား ဖြစ်တာ (၁) ရက် မကြာဘူး living together က နေကြပြီလေ တကယ်တော့ လက်မထပ် ရသေးပဲနဲ့ အတူတူ နေကြတာ မိန်းခလေး တစ်ယောက်အတွက် လုံးဝ တန်ဖိုး ကျသွားပါပြီ။အပျိုစင် ဘဝ ဆိုတာ ယောကျင်္ားတိုင်းရဲ့ တန်ဖိုး ထားခြင်းကို ခံထားရ သူလို့တောင် တင်စား ထားကြပါတယ်။ အပျိုစင် ကနေ အအို ဖြစ်ဖို့က (၅) မိနစ် မကြာပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အအိုကနေ အပျို ပြန်ဖြစ်ဖို့က … Read more
ရေနွေးကြမ်းအိုးထဲက လက်ဖက်ခြောက်ဖတ်တွေ လွှင့်ပစ်ခဲ့တာ ခုမှ မှားမှန်းသိတော့တယ်
၂၃ နှစ်အရွယ်သမီးလေး ကိုယ်ဝန်ရလို့ အမေဖြစ်သူက ကောင်လေးကို ဖုန်းဆက်ဟုပြောပီး ဖုန်းဆက်လိုက်သောအခါ
၂၃ နှစ်အရွယ်သမီးလေး ကိုယ်ဝန်ရလို့ အမေဖြစ်သူက ကောင်လေးကို ဖုန်းဆက်ဟုပြောပီး ဖုန်းဆက်လိုက်သောအခါ သမီးလေးက အသက်မှ ၂၃ နှစ်ရှိသေး ကိုယ်ဝန်ရလာတယ် အမေ လုပ်သူဒေါသအကြီးကြီး ထွက်ရပြီ ကောင်မအဲ့ဒါ ဘယ်နွားလက်ချက်လဲ အခု ဖုန်းဆက်စမ်း အဲ့ကောင်ကို ကောင်မလေး ဖုန်းဆက်တယ်။ နာရီဝက်လောက်ကြာတော့သူတို့အိမ်ရှေ့ကို Rolls Royce တစ်စီး ဆိုက်လာတယ်။ သားသားနားနား ဝတ်စားထားတဲ့ အသက်ကြီးကြီးလူတစ်ယောက်ကားပေါ်က ဆင်းလာတယ် သူ ပြောတယ် မရည်ရွယ်ပဲ ကိုယ်ဝန်ရသွားတာ စိတ်မကောင်းပါဘူး ဒါပေမယ့် ကျနော် သူ့ကို လက်ထပ် ဖို့လည်း မဖြစ်နိုင်ဘူး အဲ့ဒါကြောင့် သူ သမီးလေးမွေးခဲ့ရင် ကုန်တိုက်ကြီး ၂ ခု ဥယဉ်အိမ်ရာ ၂ ခု နဲ့ ဒေါ်လာ ၂ သန်း … Read more
An admirable girl who was trying to draw out all the water that flooded the house. Natural disasters have been one of the most devastating situations in the world. Asaresult, some cities were flooded, and roads and some houses were submerged. The house ofagirl in the sun-affected area was also involved. … Read more
ဘာမှမလုပ်ဘဲ အမြဲလိုလိုပင်ပန်းအားကုန်နေရတဲ့ အကြောင်းအရင်းများ
တစ်ခါတရံမှာ ဘာမှလှုပ်လှုပ်ရှားရှားမလုပ်ဘဲ ပင်ပန်းနေတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံ၊ ရောဂါများ၊ စိတ်ဖိစီးမှု စတဲ့အကြောင်းအချက်တွေကြောင့်လည်း အမြဲလိုလို ပင်ပန်းနေတတ်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေအပြင် အမြဲလိုလို ပင်ပန်းနေစေတဲ့ အခြားအကြောင်းအရင်းတွေကို love media ကနေ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ပင်ပန်းနွယ်နယ်တဲ့အခါ စိတ်ပင်ပန်းတာနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းတာဆိုတဲ့ နှစ်မျိုးလုံးကို ခံစားရပါတယ်။ ဘယ်အသက်အရွယ်မှာမဆို ဖြစ်လေ့ရှိပြီး အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ ပိုပြီးဖြစ်ပေါ်လေ့ ရှိပါတယ်။ ဒီလိုပုံစံ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်တာက အနားယူလိုက်ရင်တောင် မပျောက်သွားပါဘူး။ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေနဲ့ သက်ဆိုင်နေတဲ့အခါ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတာပျောက်ဖို့ အချိန်ပိုကြာတတ်ပါတယ်။ နေထိုင်မှုပုံစံ – အိပ်ရေးအရမ်းပျက်တာ သို့မဟုတ် အိပ်ချိန်များတာကြောင့် အမြဲလိုလို ထိုင်းမှိုင်းနေတတ်ပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေက တစ်နေ့ကို အိပ်စက်ချိန် ၈ နာရီရှိသင့်ပါတယ်။ – ကာဖိန်းပါဝင်တဲ့အရာကို စားသောက်တာကြောင့် အာရုံကြောစနစ်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိပြီး အိပ်မပျောက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ – … Read more